Andranomamy : efa-dahy tratra teo am-panafihana fiara | NewsMada
Andranomamy : efa-dahy tratra teo am-panafihana fiara
Voasambotry ny zandary sy ny mponina tao Antsenavao, fokontany sy kaominina Andranomamy, distrika Ambato Boeny noho ny fametrahana sakana teo amin’ny lalana, nikasa hanafika fiarakodia izay mandalo eo ny jiolahy miisa efatra.
Noho ny fikaroham-baovao, nhare ny zandary ao amin’ny Andranomamy, ny 22 oktobra tamin’ny 11 ora sy 35 minitra alina, fa misy andian’olona mametraka sakana hanafika fiara eo amin’ny lalana RN4 PK 394+700 eo Antsenavao. Nalefa teny haingana ireo zandary tany am-panaovana fisafoana tany amin’ny faritra hafa ka niara-nientana tamin’ny andrimasom-pokonolona izy ireo tamin’izany.
Vao nahatsikaritra ny fahatongavan’izy ireo ireo jiolahy ireo, nandositra anefa saingy tratra rehefa nenjehina ka notazomina natao andrimaso ao amin’ny tobin’ny zandary mba hanaovana famotorana. Mandeha ny famotorana azy ireo, ary hatolotra ny fampanoavana tsy ho ela.
« Mamokatra hatrany ny fisorohana ny tsy fandriampahalemana raha ny fifampitokisana no tafapetraka eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mponina ka ahafahana mifampizara vaovao amin’ny fotoana rehetra sy ahafahana mifanome tanana amin’ny toerana sy toe-draharaha samy hafa rehetra”, hoy ny zandary. Voasoroka aloha izany ny fanafihana tamin’ity indray mitoraka ity.